Mon, Jul 13, 2020 at 11:06pm
नेपालका पहाडी जिल्लामा पनि प्रवेश गर्‍यो सलह
बुटवल, १५ असार । भारतबट नेपालको तराईमा भित्रिएको सलह पहाडी जिल्लामा समेत प्रवेश गरेको छ । तराईको सर्लाही, सप्तरीलगाएतका अन्य जिल्लामा देखिएको सलह अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, लगायतका पहाडी जिल्लामा समेत पुगेको छ । सलहको एक झुण्ड शनिबार बेलुकी नै पाल्पा पसेको स्थानीयले जनाएका छनु । विभिन्न जिल्लामा प्रवेश गरीसकेको सलहल नेपाल,मा भने धेरै क्षति नपुर्‍याउने विज्ञले जनाएका छन् । पाल्पा र रुपन्देहीको..
तीन महिनादेखि बन्द शेयर बजार आजबाट खुल्दै
काठमाडाैं, १५ असार। तीन महिनादेखि बन्द रहेको शेयर बजार आजदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि बजार खुल्न लागेको हो । बोर्डले असार १५ गतेदेखि बजार सुचारु गर्न आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको थियो । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेसँगै शेयर बजार बन्द रहेको थियो । बीचमा केही दिन बजार खुलेको भए पनि लगानीकर्ताको विरोधका कारण..
अन्त्य हुदै काठमाडौंमा पानीको हाहाकार
काठमाडाैं, १५ असार। खानेपानी हाहाकारको समस्या समाधान गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका– १९ का स्थानीयबासीको वर्षौंदेखिको लक्ष्य पूरा हुने भएको छ । दमाईचाघाटमा खानेपानी ट्यांकी (रिजर्भ भ्वाएर) बनाउन शुरू गरिएकाले शुद्ध पानी पिउन अब स्थानीयले धेरै समय पर्खिनु नपर्ने भएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सो स्थानमा खानेपानी ट्ंयाकी र वाटर फिल्टर प्लान्ट बनाउन लागिएको बाग्मती प्रदेशका सांसद राजेश शाक्यले जानकारी..
नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुदा ३ प्रहरीसहित १८ घाइते
काठमाडौं, १५ असार । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच गएराति झडप भएको छ । झडपमा ३ प्रहरी र दुवै पक्षका १५ कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । उनीहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अहिले अवस्था सामान्य रहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए । घटना सामान्य भए पनि पछि उग्र बन्दै गएपछि झडपमा परिणत भएको प्रदेश २..
'ममा कुनै दाग, धब्बा र छिटाहरु भए आलोचना गरिदिनुस्'
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्शा छापेवापत मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने विगतको जस्तो कमजोर राष्ट्रियताको स्थिति अहिले नरहेको स्पष्ट गरेका छन्। जननेता मदनकुमार भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को प्रकाशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री फेरिन्छ भनेर कसैले..
राम्रो काम नगर्ने कर्मचारी हटाउँछुः मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आगामी आव २०७७/७८ को योजना कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। एसएमटी (सिनियर मेनेजमेन्ट टिम) को बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतबाटै मन्त्रालयका काममा आफैँ सक्रिय ‘प्रोएक्टिभ’ भएर लाग्न आग्रह गरे। उनले राम्रो कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई विनम्रतापूर्वक हटाइने पनि चेतावनी दिए। उनले भने, 'अहिल्यै मैले पूर्वसूचना गरेको छु।..
राप्रपा सचिवालयमा ९ जना मनोनीत
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबमोजिम अध्यक्षत्रयले केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा ९ जनालाई मनोनयन गरेका छन्। मनोनीत हुनेमा नीलकण्ठ काफ्ले (नवलपुर), भक्तिप्रसाद सिटौला (झापा), भरत रायमाझी र इन्द्र चित्रकार (काठमाडौँ), राजाराम बर्तौला (मकवानपुर), बाबुराम बस्नेत (भोजपुर), रामशरण पाठक (चितवन) भरतप्रसाद पाठक (नुवाकोट) र मीना शाही (ललितपुर) हुनुभएको पाटी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। साथै आज बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालयलाई पूर्णता प्रदान गरेकामा अध्यक्ष त्रयप्रति आभार..
कैलालीबाट विप्लव नेकपाका छ जना पक्राउ
अत्तरिया। कैलालीमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका प्रमुखसहित छ जना पक्राउ परेका छन्। विप्लव नेकपाका प्रमुख दलबहादुर विकसहित धनगढी नगर इञ्चार्ज र विद्यार्थी नेता पक्राउ परेका हुन्। उक्त पार्टीका जिल्ला सदस्य बबरजंग सिंह, विद्यार्थीका जिल्ला अध्यक्ष सुवास जोशी, सदस्य डम्बर सुनार र लक्की शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरुलाई धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं..
२ हजार नाघ्यो सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या, ६ जनाकाे मृत्यु
धनगढी, १४ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेको छ । शनिबार थप २२१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या २ हजार ७६ पुगेको हो । जसमध्ये ४२४ जना महिला र १६ सय ५२ पुरुष छन् । प्रदेशमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिबार क्यान्सरको उपचारमा रहेका कैलाली गोदावरी..
काठमाडाैं, १४ असार। आज नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदैछ । पार्टीनिकट अन्य संस्थाहरूले आज विविध कार्यक्रम गरी जन्मजयन्ती मनाउँदै छन् । स्व. भण्डारीको जन्मजयन्ती भएका कारण आज बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका लागि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ को सिद्धान्त प्रतिपादन गरी..
सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमकाे तयारी गर्दै कांग्रेस
काठमाडौं, १४ असार । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अन्योलमा परेको १४ औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । आशन्न महाधिवेशनसँगै सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न आइतबार दिउँसो कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो । कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिउँसो २ बजे बस्ने पदाधिकारी बैठकका लागि आशन्न महाधिवेशन र सरकारका कामकारबाहीबारे समीक्षा गरेर आगामी रणनीति तय गर्ने..
बागमती प्रदेश सरकारले २ हजार ४५० आइसोलेसन बेड थप गर्ने
हेटौंडा, १४ असार। बागमती प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले दुई हजार ४५० आइसोलेसन बेड थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। हाल प्रदेशले एक हजार २५८ वटा आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा राखेको छ। समितिका अनुसार १० प्रतिशत महिलाहरूको लागि सुरक्षित गरी उपत्यकाका तीन जिल्लामा एक हजार, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र..
Results 9851: You are at page7of 329